Imandarmedia.com.np: यौनाङ्ग स्वस्थ्य राख्न महिलाले जान्नै पर्ने आठ कुरा
Lifestyle, Lifestyle News » यौनाङ्ग स्वस्थ्य राख्न महिलाले जान्नै पर्ने आठ कुरा
१. सार्वजनिक शौचालय जहाँ ड्याप्प बसेर शौच गर्नुपर्छ, त्यस्ता शौचालय प्रयोग गर्दा टिस्यू पेपर अथवा रुमाल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्दा कमोटमा अर्थात सतहमा रहेका किटाणुहरु तपाँईको शरीरमा पुग्दैन्।
८. अलोन सेक्समा सहभागी हुनेहरु एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ । अलोन सेक्स पछि भेजिनल सेक्स गर्नु स्वास्थ्यको हिसावले निकै नराम्रो हुन्छ ।
किनभने अलोन सेक्सबाट आएको इ कोली नामक ब्याक्टेरियाले योनीमा संक्रमण गराउन सक्छ । यसले सिस्टिस इन्डोमेट्राइ प्रजनन् समस्या निम्त्याउन सक्छ ।